राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रुविना क्षेत्रीको यस्तो योजना, होला त सफल ? – NagrikPath
राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमकी कप्तान रुविना क्षेत्रीको यस्तो योजना, होला त सफल ?
Nagraikpathadmin February 28, 2019	No Comments
काठमाडौं । छरछिमेकका साथीभाइलाई भेला पारेर रुविनाका दाजु क्रिकेट खेल्थे । रुविना आफ्नै घरको झ्यालबाट चिहाउँथिन् । खेल्ने इच्छा तीव्र थियो तर, खेल मैदान टेक्ने आँट जुटाउन सकिरहेकी थिइनन् उनले । बहिनीको क्रिकेट मोह देखेर रुविनाका दाजुले एकदिन उनलाई पनि आफूसँगै लगे क्रिकेट खेल्न । भलै रुविनाले त्यसअघि क्रिकेट खेलेकी थिइनन् तर, हेरेकै भरमा पनि उनले धेरथोर क्रिकेट बुझिसकेकी थिइन् । त्यही बुझाइलाई सदुपयोग गरेर उनले ‘बलिङ’ गरिन् । उनको बलिङले सबैलाई चकित पा-यो ।
त्यस दिनदेखि रुविनाले कहिल्यै फर्केर हेर्नु परेको छैन । घरदेखि चौरसम्म तय गरेको त्यो सानो यात्राले आज उनलाई जिल्ला, क्षेत्रीय, राष्ट्रिय हुँदै कैयौं अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा समेत डो-याएको छ ।
स्मृतिका पाना पल्टाउँदा यी दिनहरु खासै पुराना लाग्दैनन् उनलाई तर, क्रिकेटमा दशक लामो समय बिताइसकेको सम्झिँदा कहिलेकाहीँ झस्किन्छिन् उनी ।
उनले राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टिमको कप्तानी सम्हालेको नै ७ वर्ष भइसक्यो । यस दौरान नेपाली महिला क्रिकेट टिमले केही हदसम्म आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न सकेको उनी बताउँछिन् ।
परिवारले पनि आफूलाई भरपूर सपोर्ट गरेको उनी सुनाउँछिन् ।
सानै उमेरमा पिताको निधन भएपछि परिवारमा रुविना, उनकी आमा र दाजु मात्र छन् । छोरीको ‘क्रिकेट मोह’ लाई राम्ररी बुझेकी रुविनाकी आमाको एउटै सपना छ, ‘छोरीले क्रिकेटमार्फत् देशको नाम उच्च राखोस्’ ।
‘परिवारलाई आफ्नो सपना बुझाउन अरु खेलाडी जस्तो गाह्रो भएन मलाई,’ प्रसन्न मुद्रामा उनी थप्छिन्, ‘मभन्दा धेरै मेरो सपना त ममीले बुझ्नुभएको छ ।’
जति सफल खेलाडी उति नै सफल कप्तान
नेपाली महिला क्रिकेट नक्षेत्रमा रुविनालाई जति अब्बल खेलाडीका रुपमा लिइन्छ उति नै सफल कप्तान पनि । उनको कप्तानीले नेपाली महिला क्रिकेटलाई धेरैपटक घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा जीत दिलाइसकेको छ ।
सन् २००९ मा मलेसियामा सम्पन्न एसीसी महिला टी २० प्रतियोगितामा पाँच बलमा पाँच विकेट लिएर नेपाललाई जिताएपछि एकाएक लोकप्रिय बनेकी रुविनाको यो प्रस्तुतिलाई धेरैले ‘चमत्कार’को नाम दिए । अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा नेपाली खेलाडीको पहिलो ‘ह्याट्रिक’ यही थियो ।
उनकै नेतृत्वमा नेपालले सन् २०१२ मा कुवेतमा सम्पन्न यू १९ महिला क्रिकेटको उपाधि समेत हात पारेको थियो । त्यसअघि नेपालले दुईपटक यू १९ उपाधि जितिसकेकाले आफूमाथि ‘ह्याट्रिक’ बनाउने ‘प्रेसर’ भएको त्यो क्षण सम्झन्छिन् रुविना । भन्छिन्,‘त्यही दबावकाबीच पनि मैले मेरो जिम्मेवारी पूरा गरी छाडें, हामीले उपाधि जित्यौं ।’
यसरी दिनानुदिन खेलमा निखार ल्याउँदै जानुले उनलाई राष्ट्रिय टिमको ‘कप्तानी’को अझै नजिक पु-यायो । अन्ततः उनले सोही वर्ष महिला टी २० राष्ट्रिय कपमा नेपाली महिला क्रिकेट टोलीको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरिन् ।
‘खेलाडी मिलेर क्रिकेटको साख जोगाइरहेका छौं’
नेपालको परिप्रेक्षमा घरेलु मैदानमा महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको आयोजना कमै मात्रामा हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा पनि उनीहरुको सहभागिता न्यून नै रहेको देखिन्छ । जसकारण खेलाडीहरु फुर्सदिला हुनु परेको गुनासो रुविनाले पोखिन् । ‘हामी जतिसक्दो अभ्यास गर्न पाइयोस्, प्रतियोगिताहरु आयोजना होस् भन्ने चाहान्छौं,’ केही विद्रोही लवजमा उनले भनिन्, ‘खेल्ने अवसर नै नपाएपछि हाम्रो खेलको स्तरोन्नति कसरी हुन्छ ?’
उनका अनुसार महिला क्रिकेटको अस्तित्व खेलाडीहरु आफै मिलेर जोगाइरहेका छन् । सम्बन्धित निकायले प्रतियोगिता आयोजना नगरेपछि खेलाडीहरु आफै मिलेर प्रतियोगिता आयोजना गर्ने र एक आपसमै सल्लाह गरेर अभ्यास गर्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
बङ्लादेश लगायत अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकका साथीहरुले आफ्नो देशमा महिनामा कम्तीमा १२–१३ वटा प्रतियोगिताहरु आयोजना हुन्छन् भनेको सुन्दा रुविनालाई नरमाइलो लाग्छ । ‘कुनै समयमा हामीले सजिलै जित्ने टिमले आज हामीलाई सजिलै जितिदिन्छ’, उनी अगाडि थप्छिन्, ‘यो सबै अभ्यासको कमीले गर्दा भएको हो ।’
यद्यपी, नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) विवाद र प्रतियोगिताहरुको खडेरीका बावजुत पनि यूएईमा हालै सम्पन्न टी २० स्म्यास क्रिकेटमा आफ्नो टिम उपविजेता हुनु ठूलै उपलब्धि भएको उनको ठहर छ । छिमेकी राष्ट्र भारतजस्तै क्रिकेटलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने विश्व कपमै भिड्ने क्षमता आफूहरुमा भएको बताउँछिन् रुविना ।
‘एक दिवसीय मान्यता पाउनलाई पनि हामीले जित्नै पर्छ’
कप्तान क्षेत्रीको काँधमा अहिले छुट्टै जिम्मेवारी थपिएको छ । सधैं उर्जाशील रहने उनी आजभोलि झनै सक्रिय देखिन्छिन् । आइसीसी महिला वल्र्ड कपको छनोट प्रक्रियाका लागि नेपाली टिमको नेतृत्व गर्दै थाइल्याण्ड पुगेकी उनमा आफ्नो टिमको प्रस्तुतिलाई लिएर चिन्ता बढ्नु स्वभाविक पनि हो ।
आफ्नो प्रस्तुति मात्र नभएर समग्र टिमकै प्रस्तुतिमा ध्यान पु-याउनुपर्दा थोरै चिन्ता, थोरै डर र धेरै उत्साह मिश्रित अनुभूतिले हुटहुटी लगाइरहेको उनी सुनाउँछिन् । ‘कप्तान भएपछि अलि बढी चिन्ता र उत्साह हुनु स्वभाविक नै हो,’ उनी भन्छिन्, ‘यद्यपी, नतिजा कस्तो आउँछ भन्दा पनि हाम्रो प्रस्तुति कस्तो रहन्छ भन्ने कुरामा फोकस्ड छु ।’
यूएइमा हालै सम्पन्न टी–ट्वान्टी स्म्यास क्रिकेटमा रनर अप भइसकेपछि आफ्ना प्रशंसकहरुको अपेक्षा झनै बढेको उनको ठम्याइ छ । त्यही अपेक्षामा खरो उत्रिनलाई महिला क्रिकेट टोलीले दिलोज्यान दिएर मिहिनेत गरेको उनी बताउँछिन् ।
‘१५ दिनको बन्द प्रशिक्षणले हामीलाई अझै तिखारेको छ, सबैले आफ्नो सतप्रतिशत प्रस्तुति दिने हो भने हामीले विश्व कप खेल्ने अवसर पनि पाउने छौं,’ आत्मविश्वासी भावमा मुस्कुराउँदै उनले लोकपथलाई भनिन् । साभारः नयाँपाइला
Previous Previous post: पोष्टमार्टम ढिलाइले मन्त्री अधिकारीको श्रद्धाञ्जली सभा भोलि बिहान हुने
Next Next post: पाकिस्तानले गिरफ्तार गरेको भारतीय पाइलट भोलि रिहा गर्ने